नेताका दम्पती नै उम्मेदवार
काठमाडौंँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू दम्पती नै उम्मेदवार बन्नुभएको छ । मङसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी–केन्द्र) सहित साना दलहरूबाट पनि चर्चामा रहनुभएका नेता दम्पती नै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
यस पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँकी श्रीमती आरजु राणा देउवा दवबै प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा विगतकै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने श्रीमती आरजु कैलालीको क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वाम गठबन्धनको तर्फबाट बर्दियाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बन्नुभएको छ । उहाँकी श्रीमती तुलसा थापा नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएको छ । श्रीमती थापा जनजाति महिलाको कोटाबाट समानुपातिकमा पर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल र उहाँकी श्रीमती सुजिता शाक्य पनि यस पटक उम्मेदवार बन्नुभएको छ । पोखरेलले प्रदेश सभाका लागि प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत दाङको क्षेत्र नं. २ (क) बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँकी श्रीमती शाक्य एमालेको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ ।
श्रीमान् श्रीमती नै उम्मेदवार बन्नुहुने अन्य नेताहरूमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती पनि हुनुहुन्छ । पुनः प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेश नं. ५ को रुकुमबाट चुनावमा भिड्दै हुनुहुन्छ भने निवर्तमान सभामुखसमेत रहनुभएकी उहाँकी श्रीमती घर्ती माओवादीको समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रकै नेता शक्तिबहादुर बस्नेत प्रदेश नं. ६ अन्तर्गत जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँकी श्रीमती सत्या पहाडी प्रतिनिधि सभाकै लागि माओवादीको समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएको छ ।
काठमाडौंको क्षेत्र नं. १० मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका हितमान शाक्य र श्रीमती अमृता थापा पनि दुवैै जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । थापा प्रतिनिधि सभाकै लागि माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएको छ ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पनि आफूसँगै श्रीमतीलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राख्नुभएको छ । मैनाली दम्पती यसअघि पनि समानुपातिकबाटै सभासद हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू दुवैै जना पालैपालो मन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो ।
त्यसो त आसन्न निर्वाचनको लागि शीर्ष दलका नेताहरूले आफ्नो नातागोता तथा नजिकका आफन्तहरूलाई टिकट दिएको भन्दै पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने यस्तो परिपाटी विश्वभर नै प्रचलनमा रहेको बताउनुहुन्छ ।
‘शासकहरूमा खास खास समयमा आफ्नो देश वा सत्ता स्वार्थको रक्षा निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र गर्नसक्छ भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘त्यही भएर आफ्नो सन्तान वा आफ्नो नजिकका आफन्त वा आफूले भनेको मान्नेहरूलाई शक्तिमा ल्याउन नेताहरू चाहन्छन्, फरक यति हो नेपालमा त्यो अलि बढी नै छ, क्षमता नभएकालाई पनि आफन्त भएकै कारण माथि उक्लने अवसर छ । ’
दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा एउटा पार्टीभित्र निश्चित परिवारले मात्र पकड जमाउने उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ । भारतमा गान्धी, पाकिस्तानमा मुसर्रफ, श्रीलङ्कामा राजपाक्षे र नेपालमा कोइराला परिवारलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिने गरिएको छ । गोरखापत्रले छापेकाे छ ।